Chọta ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri na-ekele weebụsaịtị a | Akụrụngwa n'efu
N'ihi nnukwu ọrụ a na-ekesa kwa ụbọchị site na ụdị ụdị netwọk ọ bụla, ihe ndekọ site na drones bụ usoro nke ụbọchị, n'ihi nke a, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ndị mmadụ chọọ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ elu ụfọdụ ịrụ ụdị ọrụ akwụ ụgwọ yana ọzọ, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-achọ iku ego site na mmadu iji mee onwe ha obi uto site na iji igwe ha di oke onu ahia.
Ọ bụ ya mere ọtụtụ mmadụ ji achọ ka esi abụ onye ọkwọ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na ọrụ ọhụrụ a nke na-eweta ọdịnihu dị ukwuu.
A na-eche na n'ime afọ ole na ole, 10% nke mpaghara ụgbọelu ga-abụ nke drones na ọrụ metụtara ngwaọrụ ndị a, ihe ijuanya nye ọtụtụ na ụzọ ọdịnihu maka ndị ọzọ.
1 Kedu ihe ọ ga-abụ iji bụrụ onye ọkwọ ụgbọ elu?
2 Ebe ịchọta ọrụ na-enye dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri?
Kedu ihe ọ ga-abụ iji bụrụ onye ọkwọ ụgbọ elu?
Nke ahụ kwuru, ọtụtụ n'ime gị ga-eche ihe ọ ga-abụ iji bụrụ onye ọkwọ ụgbọ elu. Nke mbụ, rịba ama na ojiji nke drone ejedebeghị na nka ma ọ bụ oke ego, ya bụ, dịka ọ nwere ikike ịnya ụgbọ ala, mmadụ nwere ike iji ụgbọ ala na-enweghị ikike ịnya ụgbọ ala yana n'otu ụzọ ahụ onye ọkwọ ụgbọelu nwere ike ịnya ụgbọ elu na-enweghị ikikere kwekọrọ. Nke a nwere ike ịnọchite anya nnukwu nsogbu na ogologo oge ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ drones maka ụmụaka na ngwaọrụ ndị ụmụaka na-ebugharị bụ ndị na-enweghị ikike iji ụgbọelu ndị a.
Simplify3D ugbu a na Spanish
Mana ka anyị were ya na anyị abụghị ụmụaka na anyị chọrọ ịkpata ndụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri na-anya ụgbọelu. N'okwu a, anyị ga-ebu ụzọ gaa gọọmentị weebụsaịtị nke AESA, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa ụgbọelu nke steeti. Na weebụsaịtị a, anyị ga-ahụ ndekọ nke usoro ọmụmụ iji bụrụ onye ọkwọ ụgbọ elu. Weebụsaịtị a dị mkpa n'ihi na na mgbakwunye na ịbụ naanị otu gọọmentị n'ime Spain nke na-achịkwa ihe niile gbasara ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, ọ nwekwara ihe iji gafere nyocha ọkwọ ụgbọ mmiri na njirimara nke ule. Tinyere ule a, ị ga-eweta akwụkwọ ahụike na anyị nọ n'ọnọdụ ahụike zuru oke.
Ọ bụrụ na anyị gafere ule ahụ, anyị ga-edebanye aha n'otu weebụsaịtị AESA dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri, usoro a na - akwụghị ụgwọ nke naanị ihe ga - achọ anyị bụ ịgafe nyocha nke akụrụngwa anyị site n'oge ruo n'oge.
Dịka ị pụrụ ịhụ, iwu nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ dị iche na usoro nke ikike ịnya ụgbọ ala yana, maka ọtụtụ ndị, ọnụ ahịa ya nwere ike ịdị obere karịa ikike ịnya ụgbọ ala n'onwe ya.
Ebe ịchọta ọrụ na-enye dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri?
N'oge a ị ga-eche ebe ị ga-ahụ ọrụ na-enye dị ka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri. Tupu nke ahụ, nke mbụ ọ ga-adaba adaba iji doo anya banyere ọrụ ndị a ga-arụ na kaadị dị otú ahụ.
Ugbu a na Spain, a na-eji drones maka akụkọ foto, dịka akụkụ nke omume nke Ọrụ Nchedo Obodo Obodo Spanish, iji nyochaa nnukwu ala, ịkọ ugbo, nyocha mbara igwe ma ọ bụ nyocha ihe ochie.. Enwere ike iji ha maka ebumnuche ndị ọzọ mana n'oge a anaghị eji ha ma ọ bụ na etinyeghị ya na iwu, anyị na-ezo aka na mmemme dịka njem nke ihe, ọrụ dị ka obere satellites ma ọ bụ ebumnuche ndị ọzọ a na-atụle na nnukwu ahịa ma ọ bụ CEO nke nnukwu ụlọ ọrụ nkà na ụzụ.
Esi gbanyụọ Raspberry Pi
Nke ahụ kwuru, o doro anya na ọrụ ahụ dị elu, dị elu nke ukwuu ma na-enye anyị ohere ịchọta onyinye ọrụ n'ọtụtụ ebe: site na akwụkwọ ozi a na-ahụkarị na ụlọ ọrụ ebe ọ na-ekwu "onye ọkwọ ụgbọ mmiri Drone chọrọ" gaa na webụsaịtị ọrụ dị ka InfoJobs. Ma enwekwara ibe weebụ nke emepụtara maka ebumnuche a, iji nye ndị ọrụ ụgbọelu ọrụ dị egwu.
Na echiche a mụrụ drones.io, ibe weebụ ebe ịchọrọ tinye ndị na-anya ụgbọelu nwere mmasị n'ụdị ọrụ a. Ọ bụrụ na ị na-agagharị na ibe ahụ, ị ​​ga - ahụ etu ụzọ abụọ ị ga - esi abanye, ma ọ bụ dị ka onye nwere mmasị na ọrụ ma ọ bụ, site na arịrịọ ndebanye aha, debanye aha na ya dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri na - amalite ịnata onyinye iji kwụọ ọrụ gị O doro anya na ihe kariri ihe omuma.
Obi abụọ adịghị ya na echiche karịrị echiche na-atọ ụtọ, ọ bụ ezie na oge ọ bụ eziokwu na ọ dị oke mma ala nwere oke ke ndinyịme sụk ndusụk ikpehe ke United States. A na-ekewa ndị ọkwọ ụgbọ ala, ozugbo edebara aha ha, na ngalaba 11 dị iche iche ebe anyị hụrụ agbamakwụkwọ, oriri, egwuregwu ... na-enwe ike ịkwụ onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ ọrụ ya ma ọ bụ kwa elekere ọrụ ọ rụrụ.
Nhọrọ ọzọ ị na-asụ Bekee bụ 3drpilot, Ebe nrụọrụ weebụ na-adọrọ mmasị ebe anyị ga-achọpụtaghị ọrụ ma anyị ga-ahụkwa ọgbakọ dị ike banyere drones.
Ebe nrụọrụ weebụ dị na Spanish dịkwa ma na nke a naanị peeji abụọ na-apụta: Pilotando.es y dronespain.pro. Ha bu web peeji nke nwere otutu ndi otutu ndi na-acho ugbo elu na ndi oru ndi choro iku ndi oru ugbo ma obu opekata mpe ndi nwere ikike ha.
Obere obere ụzọ ọrụ ndị a na-abawanye, yana mkpa nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri n'onwe ha. Iji nweta echiche, E nwere ihe dịka ndị ọkwọ ụgbọelu 9.000 na-achịkwa na European Union, nke ahụ bụ, na akwụkwọ ikike na ikike niile, maka ahịa nke nde mmadụ 700. Ego ole ka ị ga - enweta dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri?
Nke a bụ ebe ọtụtụ mmadụ ga na-ele anya na ikekwe isi okwu nke enweghị ozi na amaokwu. Ebe nrụọrụ weebụ ndị metụtara usoro ịnya ụgbọelu na-achọ ịpụta ọkwọ ụgbọelu nwere ike ịnwe ụgwọ ọnwa kwa afọ nke euro 100.000Ihe ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na - agagharị na European Union na n'ezie, ịnwere ike ịhapụ onwe gị ịkwaga n'etiti mba ma nọrọ mgbe ị na - arụ ọrụ. M pụtara, ezi ọrụ ma dịkwa oke ọnụ.
Maka ndị nwere ezi uche, nke ahụ bụ, maka ndị ga-agafe Spain naanị, ụgwọ ọnwa ụgwọ nke onye ọkwọ ụgbọ elu agaghị agabiga euro 2.000 kwa ọnwa.
Nke a bụ n'ihi na ọrụ ndị achọrọ ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri chọrọ ole na ole.
Na Spain, onye ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ike ị nweta ndụ dị ka onye ọrụ, nke ụlọ ọrụ chọrọ ọrụ nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụ naanị ya were ya, ebe ọ bụ onye na-arụrụ onwe ya ọrụ ma na-enyekwa ya ọrụ ịrụ ọrụ ma ọ bụ ihe metụtara metụtara drone. N'okwu nke ikpeazụ, onye ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ọtụtụ ahịa site n'inwekwu ọrụ ọ nwere ike ịme, mana ọ bụkwa eziokwu na enweghị ike ịgba ụgwọ oge ya na ọnụahịa dị elu ebe ọ ga-agaghị enweta ụgwọ opekata mpe ebe ọ bụ na onye nkịtị agaghị akwụ ụgwọ onye ọkwọ ụgbọ ala Drone euro 2.000 ma ọ bụ karịa maka ịchọ ugbo ma ọ bụ ịme vidiyo nke obodo.
N'ihe banyere ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ, ụgwọ ọrụ na mgbakwunye ịbịaru ma ọ bụ karịa euro 2.000 kwa ọnwa, enwere nchekwa na ndị ọrụ onwe ha enweghị na kwa ọnwa ọ ga-enweta otu ụgwọ ahụ, ma ọ nwere ihe omume. N'ọnọdụ ọ bụla, na-eburu n'uche ọnọdụ ọrụ na Spain yana ịbụ onye ọkwọ ụgbọelu bụ ọrụ ọhụrụ, ụgwọ maka ịrụ ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọelu adịghị oke elu, n'oge a.
Mkpa maka onye ọkwọ ụgbọ mmiri dị, ọ bụghị naanị na European Union kamakwa na Spain na mba ndị ọzọ na-abụghị EU na Spain. Nke a bụ ohere azụmaahịa nke ọtụtụ na ụzọ iji na-akpata ego.
Otú ọ dị, lUsoro maka ojiji na ebumnuche nke drones ka amachapụghị nke ọma nke nwere ike ibute nsogbu na ụfọdụ ọrụ, ihe na ugbu a anaghị eme na Spain.
N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ekele na ọrụ ọhụụ metụtara teknụzụ na-egosi na anaghị etinye "ijikọ" onye ọrụ na kọmputa, dị ka ịbụ onye ọkwọ ụgbọ mmiri Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Chọta ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri na-enye ekele maka webụsaịtị a
onye martin dijo
Ekele m, abụ m onye ọkwọ ụgbọ mmiri Drone nwere ikike na nke onwe m na Madrid
Zaghachi ivan martin
Enwere m mmasị na eserese na drones, enwere m drone nke m, ikikere ọkwọ ụgbọ elu dị elu yana m na-arụkwa ọrụ na ntinye vidiyo. ekele!
Zaghachi juan antonio
Enwere m mmasị
Ugbo ala nke AESA
drone pilot nke AESA na vigo
Zaghachi Ramon Merino Lobato
N'ehihie, aha m bụ Ramon na abụ m onye ọkwọ ụgbọ mmiri dị elu, (AESA)
Miguel Ranera ebe nchekwa dijo
Ndewo, Abụ m Miguel
Abụ m onye na-ese foto
Abụ m onye na-anya ụgbọelu na onye ọrụ nke m
Enwere m ike ifefere ha na anya ụgbọ elu karịa anya anya
Ọrụ nyocha na mmepe
Photography, filming na keikuku nnyocha (topographic nnyocha, fotommetry)
Nlere anya nke ikuku na nyocha tinyere ihe nkiri na ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ
Mberede, ọrụ ọchụchọ na nnapụta
Zaghachi Miguel Ranera
Abụ m Oscar David Briñez Fonseca, RPA Commercial Pilot gbaara na Colombia, nwere ahụmịhe na vidiyo na foto ikuku, ihe omume, ụlọ, ụlọ eletriki, ụlọ.
Yabụ na m na-achọ ọrụ iji tinye ihe ọmụma m na ndị nwere mmasị ma mụta ọtụtụ ihe.
Zaghachi Oscar david Briñez Fonseca
Aha m bụ Rafa na abụ m onye ọkwọ ụgbọ elu (AESA) nwere drones nke m.
Ana m eme kwa mmezi na mmezi ndi drone.
M bi ugbu a na Palma de Mallorca.
Companieslọ ọrụ Drone na Spain dijo
E nwere weebụsaịtị dịka nke Juan Luis kwuru maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Spen. O nweere onwe ya kpamkpam, ọ nweghị ụdị ọrụ ọ bụla na azụmaahịa ahụ dị n'etiti onye ahịa na onye ọrụ drone. Echere m na ọ nwere ike ịmasị ịchọta ọrụ na ọrụ maka ndị ahịa na-arịọ atụmatụ atụmatụ ọrụaka na akụ na ụba site na weebụsaịtị Pilotando.
Zaghachi ụlọ ọrụ drone na Spain
Ndewo, aha m bụ Jose Ángel, nke nwere aha onye ọkwọ ụgbọ elu elu nke AESA nyere.
M nwere RPA a Phanton 4 pro. Abụ m onye ọrụ bekee na ngalaba nchekwa, yabụ abụ m ezigbo mmadụ na ntụkwasị obi.
Mpaghara Murcia na Cartagena.
E-mail m. danielcancan09@gmail.com.
Zaghachi Jose Angel
INI EGO NA ỌR OPA MGBE Ọchịchị ASTURIAS
YUNEEC TYPHOON H KWURU
Daniel onyekwere dijo
INI ekededi nke AESA nyere ya
Enwerem nke m DRONE Phanton 4 pro
Ahụmahụ na Edezi vidiyo na mmemme dị iche iche
Nwere mmasị na foto, Filming wdg ...
Ọkwa nke Bekee C1 na German A2
Nweta ebe obibi ma nke mba ma nke mba
Zaghachi Daniel Fernández
hello, m na-achọ ụlọ ọrụ ndị ọrụ ụgbọelu chọrọ
Obodo Juan Carlos dijo
Aha m bụ Juan Carlos. Enwere m aha 2 na usoro radiophonist na Phantón pro v2 drone na ohere nke Inspire 2.
Enwere m ikikere onye ọrụ. E wezụga nke ahụ, enwere m ụlọ ọrụ na-ege ntị na ntanetị iji malite ndekọ ọ bụla.
Zaghachi Juan Carlos Villa